Indlela yokukhipha "Oxhumana" eduze kwegama
Sekuyisikhathi esithile manje, iqembu elithile labasebenzisi be-social network "VKontakte" elithandwayo lakwazi ukuthola izimpawu ezihlukile ngesibonakaliso kwesokudla negama lakhe nesibongo. Amanothi okuhlola anjalo atholakala ngemuva kokudlula inqubo yokuqinisekisa (ukuqinisekisa ubuqiniso bekhasi). Okungukuthi, ngaphambi kokufaka uphawu "Oxhumana naye", ikhasi lomsebenzisi kufanele liqinisekiswe. Kumele kuqashelwe ukuthi lokhu kusebenza kuphela kubadumi, abasebenzisi abancane lo msebenzi awutholakali.
Iqiniso liwukuthi uma inani elikhulu labasebenzisi lingabeka uphawu ku "Oxhumana nabo" - lo mbuzo uzobe uhlaziywe, futhi ngeke usadinge kunoma ubani.
Ukuze unqume umbuthano wabantu okuthethelelwa kulokhu, umphathi we-VKontakte ubonise izinqubo eziningana, okumele umuntu azithobele. Ngakho, ungabhala kanjani "Oxhumana"? Kulokhu kudingeka uhambisane namaphuzu alandelayo:
Ku-Wikipedia mayelana nomsebenzisi kufanele kubhalwe ukuthi-cha, kodwa isihloko.
Abezindaba kufanele baphuze ngezikhathi ezithile lo muntu.
E-intanethi, ukutholakala okubalulekile komuntu kufanele kuvezwe ezindaweni ezifanele.
Njengoba kushiwo ngenhla, yizona zindlela ezikhomba ukuthi umbuthano wabantu unelungelo lokuthola uphawu. Kodwa ngaphambi kokuba ufake uphawu "Oxhumana naye", ikhasi lizohlolwa ukuhambisana nezinye izidingo:
Leli khasi alifaki ukuba khona kwamazwi ahlambalazayo.
Ngokufanayo, ukuba khona kwazo zonke izinhlobo zogaxekile kukhishwe. Ukuqhubeka kusukela kula maphuzu amabili, ikhasi lomuntu owaziwayo kumelwe lihlale lilinganisela, njengoba abanye abasebenzisi bangase babeke imibono kokubili ogaxekile nezinkulumo ezingcolile. Ungase futhi umane unqabe ukuthi kungenzeka ukuphawula "odongeni" lwakho emasimini abanzi.
Ikhasi kumele lisebenze. Lapha, idatha kufanele ibuyekezwe, isimo sishintshiwe, amarekhodi wevidiyo athunyelwe, nokunye okuningi.
Ikhasi kumele liphelele 100%.
Yebo, iphuzu lokugcina, eliyinqaba kakhulu: inani labangane alikwazi ukunqoba ngaphezu kwenani lababhalisile.
Kuphela ngemuva kokuthi zonke lezi zindlela ziqinisekisiwe, umsebenzisi unelungelo lokuhlola ukuthi ikhasi lakhe "Kuxhumana" - ikhasi elisemthethweni.
Futhi ngemva kwalokhu umsebenzisi unikezwa uphawu lokuhlola, okuyinto ngendlela elula enikezela phakathi "nabantu abulula." Kuyafaneleka futhi ukuphawula ukuthi okwamanje, inani elikhulu labadumile banalo lo hluko. Lokhu kuhlanganisa uNdunankulu uDmitry Medvedev, uMarina Kozhevnikova, uTina Kandelaki, uYury Shevchuk, u-Artemy Lebedev kanye nezinye izinkanyezi eziningana.
Ngokuqondene nokuthi ungabhala kanjani "Oxhumana" nabanye abasebenzisi, cishe akunakwenzeka. Okungukuthi, kungenzeka kuphela ngemvume yokuphathwa kwesayithi. Futhi uma othile ephumelela ngandlela-thile ukwenza lokhu - ukuphathwa kwesayithi kuzosusa.
Ungashintsha kanjani iphasiwedi ku- "Ofunda nabo": izincomo eziningiliziwe
Izimiso ezithakazelisayo nezingavamile ngogogo.
Umhlobo Kazakhstan kanye nezici zayo. Njengoba uhlobo luvikelwe Kazakhstan?
Indlela yokwenza i-hookah ku iwayini: izici kanye nezincomo
Isichibi neminye Soso izinqubo okumelwe Khonka: isihambi real ukubuyekezwa, ukwakheka kanye nekghono
Life e-Italy: izici, izinzuzo nezingozi
"Metaprot": yokusetshenziswa, ngempela
Library - kuyini? Yiziphi izinhlobo imitapo khona?
Izinto Pure futhi Izingxube yalo. Izindlela ngokuhlukana Izingxube
BMW 850: Umlando kanye nencazelo
Professional izinwele wemvelo. Izibuyekezo